जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ सूचिकृत कहिले ? यस्तो छ क्यापिटलको जवाफ - Arthasansar
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ सूचिकृत कहिले ? यस्तो छ क्यापिटलको जवाफ
विहीबार, ३१ असार २०७८, १२ : ४४ मा प्रकाशित
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचिकृत हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाे छ ।
उक्त साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकरणका लागि हालसम्म प्रक्रिया चलिरहेकाे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले अर्थ संसार डटकमलाई जानकारी दिएकाे छ । कहिले हुन्छ भन्ने हालसम्म यकिन नभएकाे क्यापिटलले बताएकाे छ । क्यापिटलका अनुसार अर्काे सातासम्म कहिले हुने निश्चित हुनेछ ।
संस्थाको आईपीओमा परेको आवेदनमध्ये २० लाख १८ हजार ३ सय ८ जना मात्र योग्य आवेदक रहेका थिए । गोलाप्रथाबाट गरिएको बाँडफाँडमा बढीमा ११ कित्ता र थाेरैमा १० कित्ता बाँडफाँड गरिएकाे थियाे । आईपिओ वितरण गर्दा १ लाख ८४ हजार ८ सय १ जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर र १० कित्ता भन्दा धेरै आवेदन दिने ५ जनाले भने ११ कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् ।
संस्थाको आईपीओमा ६९ हजार ९ जना आवेदककाे आवेदन रद्द भएकाे छ । ३ हजार ४ सय ७१ जना श्ंकास्पद आवेदक र सीआस्वाबाट आवेदन दिने ६५ हजार ५ सय ३८ जना गरी कुल ६९ हजार ९ जना आवेदककाे आवेदन रद्द भएकाे निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले जानकारी दिएकाे छ । कुल १४ लाख ७० हजार ७ सय ४० कित्ता आईपीओ रद्द भएकाे हाे ।
नेप्सेले लघुवित्तकाे पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्युनतम ३०५ रूपैयाँ २७ पैसादेखि अधिकतम ९१५ रुपैयाँ ८१ पैसा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेकाे छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीकाे पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज ताेक्ने गर्दछ ।
सेबाेनमा प्रकाशन भएकाे विवरण पत्र अनुसार जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिसेयर नेटवर्थ ३०५ रूपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । साेही नेटवर्थकाे ३ गुणा ९१५ रुपैयाँ ८१ पैसा हुन्छ ।